Fursada Layaabka Leh Ee Suuq Geysta IoT | Martech Zone
Saturday, April 7, 2018 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Toddobaad ama ka hor ayaa la i weydiistey in aan ka hadlo munaasabad gobol oo ku saabsan Internet of Waxyaabaha. Sida martigeliye ka ah Faylasha Dell Luminaries, Waxaan la kulmay tan tan oo u dhiganta xisaabinta Edge iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee durba qaabeysa. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadiso fursadaha suuqgeynta marka la eego IoT, si daacadnimo ah looma helo dood badan oo khadka tooska ah ah. Xaqiiqdii, waan ka xumahay maadaama IoT ay beddeli doonto xiriirka ka dhexeeya macaamiisha iyo ganacsiga.
Maxay IoT Isbadal u tahay?
Waxaa jira hal-abuurnimo dhowr ah oo runta u imanaya oo beddeli doona IoT:
5G Wireless wuxuu awood u siin doonaa xawaaraha xawaaraha xawaaraha xawaareyn kara baabi’i isku xidhka fiilooyinka gudaha iyo ganacsiga. Imtixaannadu waxay dhammeeyeen xawaare ka badan 1Gbit / s ilaa masaafo dhan 2 kiiloomitir.
Miniaturization ee ka mid ah walxaha xisaabinta ee kororka awooda xisaabinta ayaa ka dhigi doonta aaladaha IoT kuwo caqli badan iyada oo aan loo baahnayn saad awood badan. Kumbuyuutarrada ka yar shilinku waxay ku socon karaan si joogto ah tamarta qoraxda iyo / ama ku-dallaca wireless.
Ammaanka horusocodyada ayaa lagu dhex dhejinayaa qalabka dhexdooda halkii looga tagi lahaa macaamiisha iyo ganacsiyada si ay naftooda u gartaan.
The qiimaha IoT qalabka ayaa ka dhigaya kuwo aan qaali ahayn. Horusocodka wareegtada daabacan waxay shirkadaha u suurta gelin doontaa inay naqshadeeyaan oo ay soosaaraan waxyaabaha ay gaarka u leeyihiin ee IoT -ka oo awood u siinaya isticmaalkooda meel walba. Xitaa daabacadaha OLED ee jilicsan ayaa ku dhow geeska - iyagoo bixinaya habab xitaa loogu soo bandhigo farriimaha meel kasta.
Haddaba Sidee Suuq Geyntan Saameynta ah ku yeelan doontaa?
Ka fikir sida macaamiisha ay u ogaadeen una baareen badeecooyinka iyo adeegyada ay bixiyaan ganacsiyada boqolkii sano ee la soo dhaafay.
Suuqa - Qarni ka hor, macaamilku wuxuu bartay oo keliya badeecad ama adeeg si toos ah qofka ama ganacsiga iibinaya. Suuqgeynta (sidaas loogu magac daray) waxay ahayd awooddooda ay ku iibin karto gudaha suuqa.
Warbaahinta baahsan - Markii ay warbaahintu heshay, sida madbacadda, ganacsiyada hadda waxay heleen fursad ay ku xayeysiiyaan wixii ka baxsan codkooda - bulshadooda iyo wixii ka baxsan.
Warbaahinta Bulshada - Warbaahinta baahsan ayaa kacday, iyadoo hadda siineysa ganacsiyada awood ay ku gaaraan kumanaan ama xitaa malaayiin dad ah. Boostada tooska ah, telefishanka, raadiyaha… ciddii iska leh dhagaystayaasha ayaa amar ku bixin kara doollar fara badan si ay u gaaraan dhagaystayaashaas. Waxay ahayd mid rasmi ah, warshadaha xayeysiinta ayaa ku koray dherer iyo faa'iidooyin aad u ballaaran. Haddii ganacsiyada ay rabaan inay barwaaqoobaan, waxay ku qasbanaayeen inay ka shaqeeyaan albaabbada lacagta laga helo ee xayeysiistayaasha.
digital Media - Internetka iyo baraha bulshadu ku wada xiriirto waxay siisay fursad cusub oo ka dhex baxda warbaahinta guud. Shirkaduhu hadda waxay ka shaqeyn karaan ereyga suuq geynta afka iyagoo adeegsanaya raadinta iyo wadiiqooyinka bulshada si ay u dhisaan wacyigelin ayna ula xiriiraan dhagaystayaasha la beegsanayo. Dabcan, Google iyo Facebook waxay fursad u heleen inay dhisaan irridda faa iidada xigta ee udhaxeysa ganacsiga iyo macaamilka.
Waqtiga Cusub ee Suuqgeynta: IoT
Xilliga cusub ee suuqgeynta ayaa inagu soo food leh taas oo ka xiiso badan wax kasta oo aan horay u soo aragnay. IoT waxay bixin doontaa fursado aan caadi aheyn oo aynaan waligeen horay u arkin - fursadaha ganacsatadu u leeyihiin inay ka gudbaan dhammaan irdaha oo ay la xiriiraan, markale, si toos ah rajada iyo macaamiisha
Bandhigyada dhexdooda, saaxiib wanaagsan iyo Khabiirka IoT John McDonald waxay siisay aragti aan caadi aheyn mustaqbalkeena dhow. Wuxuu sharraxay maanta gawaarida iyo awoodda xisaabinta ee ay horay u haystaan. Haddii la hawlgeliyo, baabuurtu waxay hadda la xiriiri karaan milkiilayaashooda, iyagoo ogeysiinaya inay tollayaan oo daalayaan. Baabuurtu waxay kuu sheegi karaan inaad qaadatid bixitaanka soo socda oo ay kuu tilmaamaan Starbucks-ka kuugu dhow… xitaa kuu dalbo sharaabka aad ugu jeceshahay.
Aynu sii qaadno tallaabo dheeraad ah. Kawaran haddii, taa beddelkeeda, Starbucks ay ku siiso bakeeriga rakaabka oo leh teknolojiyad IoT ah oo si toos ah ugula xiriirta gaarigaaga, meelaheeda caalamiga ah, dareemayaasheeda, iyo mugga gawaarida ay kuu sheegaan in cabitaankaaga la dalbaday iyo inaad ka soo baxdo bixitaanka xiga. Hada, Starbucks kuma xirna albaab laga bixiyo oo lala xiriiro macaamilka, toos ayey ula xiriiri karaan macaamilka.
IoT wuxuu ahaan doonaa Meelkasta, Waxkasta
Waxaan horay u aragnay halka shirkadaha caymiska ay ka bixiyaan qiimo dhimis haddii aad gaarigaaga dhigato qalab ku wargelinaya qaababka wadista baabuurka shirkadda. Aynu eegno fursado badan:
Qalabkaaga caymiska otomaatiga ah wuxuu kugula xiriirayaa jihooyinka wadista ee wax ku oolka ah iyadoo ku saleysan caadooyinkaaga wadista baabuurta, meelaha laga fogaado khataraha, ama goos gooska si ay kaaga caawiso inaad nabdoon tahay.
Sanduuqyadaada Amazon waxay leeyihiin aalado IoT ah oo si toos ah kula soo xiriira si ay kuu tusaan meesha ay ku yaalliin si aad ula kulanto halka ay joogaan.
Shirkaddaada adeegga guryaha ee deegaankaaga ayaa ku rakibaysa qalabka IoT-ga gurigaaga lacag la'aan iyadoo lagu ogaanayo duufaannada, qoyaanka, ama xitaa cayayaanka - iyagoo ku siinaya dalab aad ku hesho adeeg degdeg ah. Laga yaabee inay xitaa ku siiyaan dalab aad ugu gudbiso deriskaaga.
Dugsiga ilmahaagu wuxuu ku siinayaa IoT gelitaanka fasalka si dib loogu eego dhaqanka ilmahaaga, caqabadaha jira, ama abaalmarinnada. Xitaa waxaad awoodi kartaa inaad si toos ah ula xiriirto iyaga haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Wakiilkaaga guryaha wuxuu bilaabaa qalabka IoT gurigaaga oo dhan si uu u bixiyo safarro dalxiis iyo mid fog, awood u leh inuu la kulmo, salaamo, kana jawaabo su'aalaha kuwa wax iibsan kara goor kasta oo maalin ama habeen ah markay ku habboon tahay labada dhinacba. Qalabkaas si otomaatig ah ayey u shaqeeyaan markii aad guriga joogto oo aad fasax ku bixiso jadwalkaaga.
Bixiyahaaga daryeel caafimaad wuxuu kuu soo gudbinayaa dareemayaal gudaha ama dibadeed ah oo aad xirato ama aad dheefshiido u siiso xog muhiim ah dhakhtarka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad iska ilaaliso isbitaallada gebi ahaanba, halkaas oo ay ka jiraan halista infekshin ama jirro.
Beertaada deegaanka waxay siisaa aalado IoT ah oo xiriiriya arrimaha badbaadada cuntada ama gaarsiiya hilibka, khudaarta, soona saarta waqti ku habboon waqtiga kula jooga. Beeraleydu waxay hagaajin karaan jidadka saadaalinta isticmaalka iyadoon loo baahnayn inay ku iibiyaan megastoreeriyada qayb yar oo ka mid ah qiimaha. Beeraleydu way barwaaqoobaan bini aadamkuna waxay badbaadiyaan saliida aan loo baahnayn ee keenista badan iyo qaybinta.
Waxa ugufiican dhamaan, macaamiisha ayaa xakamayn doona xogteena iyo cida marinkarta, sida ay kuheli karaan, iyo goorta ay heli karaan. Macaamiisha ayaa si farxad leh ugu ganacsan doona xogta markay ogaadaan in xogta ay siinayso qiime iyaga iyo in loola dhaqmayo si masuuliyad leh. IoT, ganacsiyada waxay ku dhisi karaan xiriir aamin ah macaamilka halka ay ka ogyihiin in xogtooda la iibin doonin. Nidaamyadu naftooduna waxay xaqiijin doonaan in xogta lagu xafido oo aamin ah. Macaamiisha ayaa dalban doona is dhexgal iyo waliba u hogaansanaan.
Marka, sidee ku saabsan ganacsigaaga - sidee ayaad ugu beddeli kartaa xiriirkaaga rajooyinka iyo macaamiisha haddii aad xiriir toos ah leedahay oo aad si toos ah ula xiriiri lahayd? Waxaad sifiican u bilaabi laheyd ka fikirkeeda maanta… ama shirkadaada waxaa laga yaabaa inaysan awoodin inay tartan la gasho mustaqbalka dhow.
Tags: 5gereyiotisgaarsiinta suuq geynta